Unyango olusengqiqweni kunye nokusetyenziswa okufanelekileyo kwemanyolo yemfuyo kungazisa ingeniso ebonakalayo kuninzi lwamafama, kodwa kukwanyusa ukuphucula ishishini labo.
Isichumiso sezinto eziphilayo luhlobo lwesichumisi olunemisebenzi yesichumiso se-microbial kunye nesichumiso sezinto eziphilayo, esivela ikakhulu kwintsalela yezilwanyana kunye nezityalo (ezinje ngomgquba wemfuyo, umququ wezityalo, njl. njl.) Kwaye yenziwe ngonyango olungenabungozi.
Oku kugqiba ukuba isichumiso semvelo sezinto eziphilayo sinamacandelo amabini: (1) umsebenzi othile wezinto ezincinci. (2) iphathwe ngenkunkuma ephilayo.
(1) Umsebenzi we-microorganism ekhethekileyo
Amagciwane asebenzayo ngokuthe ngqo kwizichumiso zendalo eziphilayo zihlala zibhekisa kwii-microorganisms, kubandakanya iintlobo ezahlukeneyo zebhaktiriya, ifungi kunye ne-actinomycetes, ezinokukhuthaza ukuguqulwa kwezakhamzimba zomhlaba kunye nokukhula kwezityalo emva kokufakwa komhlaba. Imisebenzi ethile inokuhlelwa ngolu hlobo lulandelayo:
Iibhaktheriya zokulungisa i-nitrogen: (1) ibhakteria yokulungisa initrogen: ikakhulu ibhekisa kwizityalo ezinemidumba ezinje nge: rhizobia, nitrogen-fixing rhizobia, izithole ezingapheliyo ze-ammonia-fixing rhizobia, njl .; Isityalo esingenangqolowa semileotic nitrogen-nitrogen fixing bacteria ezinje ngeFranklinella, iCyanobacteria, ukusebenza kwayo ngenitrogen kuphezulu. Iibhaktheriya zokulungisa i-nitrogen ezenzekelayo: ezinjengebhakteria yokulungisa i-nitrogen emdaka, intsholongwane ye-photosynthetic, njl. , ezinje ngePseudomonas genus, lipogenic nitrogen-fixing helicobacteria, njl.
Ukuchithwa kwe-fosiforus , Streptomyces, njl.
I-3.Ichithwe (inyibilikisiwe) ibhakteria ye-potassium: iibacteria ze-silicate (ezinjenge-colloid Bacillus, i-colloid Bacillus, i-cyclosporillus), ibacteria ye-potassium engeyiyo yesilicate.
5. Ukukhulisa ukukhula kwebhaktheriya kunye nokukhulisa izityalo kwifungi.
6.Iibhaktheriya zesikhulumi sokukhanya: iintlobo ezininzi zohlobo lwePseudomonas gracilis kunye neentlobo ezahlukeneyo zohlobo lwePseudomonas gracilis. Ezi ntlobo ziibhaktiriya ze-aerobic ezinokukhula kubukho be-hydrogen kwaye zilungele ukuveliswa kwesichumiso se-organic.
7. Intsholongwane enganyangekiyo kunye nokwanda kwemveliso yebhaktiriya: iBeaververia bassiana, iMetarhizium anisopliae, iPhylloidase, iCordyceps kunye neBacillus.
8. I-cellulose yokubola kwebhakteria: i-thermophilic lateral spora, iTrichoderma, iMucor, njl.
9.Ezinye ii-microorganisms ezisebenzayo: emva kokuba iintsholongwane zingene emhlabeni, zinokugcina izinto ezisebenzayo zomzimba ukukhuthaza nokulawula ukukhula kwezityalo. Ezinye zazo zinokucocwa kunye nokubola kwesiphumo kwiityhefu zomhlaba, ezinje ngegwele kunye ne-lactic acid bacteria.
2) Izinto zendalo ezivela kwiintsalela zezilwanyana eziye zabola. Izinto eziphilayo ngaphandle kokuvumba, azinakusetyenziswa ngokuthe ngqo ukwenza isichumisi, naso asinakungena kwintengiso.
Ukuze wenze iibhaktheriya zidibane ngokupheleleyo kunye nezinto ezingafunekiyo kwaye zifezekise ukucocwa ngokucokisekileyo, zinokuxhokonxa ngokulinganayo ikhomputhaumatshini wokujika we-ost njengasezantsi:
Izinto eziqhelekileyo ezisetyenziswa kwizinto eziphilayo
(1) Ilindle: inkukhu, ihagu, inkomo, iigusha, ihashe kunye neminye imanyolo yezilwanyana.
(2) Ngeendiza: iindiza zengqolowa, iindiza, ingqolowa yengca, iindiza zesoya kunye nezinye iindiza zezityalo.
(3) ikhoba kunye ne-bran. Irayisi umgubo womgubo, ipeanut umgubo womgubo, ipeanut izithole umgubo, irayisi bran, ngundo bran, njl.
(4) iityisi: izitya ze-distiller, iisosi zesoya yesosi, iiviniga izitya, izitya ezinoboya, izitya ze-xylose, ii-enzyme, iigrikhi, izitya zeswekile, njl.
(5) isidlo sekhekhe. Ikhekhe leembotyi zesoya, isidlo seembotyi zesoya, ioyile, ikeyiki edlwenguliweyo, njl.
(6) Olunye udaka lwasekhaya, udaka lokucoca ulwelo lokucoca iswekile, udaka lweswekile, i-bagasse, njl.
Ezi zinto zingasetyenziswa njengezincedisi ezincedisayo ngezinto ezingezizo imveliso yezichumiso eziphilayo eziphilayo emva kokuvumba.
Ngezinto ezithile ezincinci kunye nezinto ezibolileyo zezinto eziphilayo ezi meko zimbini zinokwenziwa ngesichumiso semvelo sendalo.
1) Indlela yokongeza ngokuthe ngqo
1, khetha i-bacterial microbial ekhethekileyo: inokusetyenziswa njengendidi enye okanye ezimbini, ubuninzi zingabi ngaphezulu kweentlobo ezintathu, kuba ukhetho oluninzi lweebhaktiriya, lukhuphisana ngezondlo phakathi komnye nomnye, zikhokelela ngokuthe ngqo ekusebenzisaneni kwe-offset.
2. Ukubalwa kwemali yokongezwa: ngokwe-NY884-2012 esemgangathweni yesichumiso se-bio-organic e-China, inani elisebenzayo leebhaktiriya eziphilayo zesichumiso se-bio-organic kufuneka lifike kwi-0.2 yezigidi / g. Kwitoni enye yezinto eziphilayo, ngaphezulu kwe-2 kg yezinto ezithile ezisebenzayo ezinenani elisebenzayo leebhaktiriya eziphilayo ≥10 billion / g kufuneka zongezwe. Ukuba inani leebhaktiriya eziphilayo liphila li-1 billion / g, ngaphezulu kwama-20 kg kuyakufuneka kongezwe, njalo njalo. Amazwe ahlukeneyo kufuneka ongeze ngokufanelekileyo kwiindlela ezahlukeneyo.
3. Yongeza indlela: Yongeza ibhaktiriya esebenzayo (umgubo) kwinto ephilayo eguqulweyo ngokwendlela ecetyiswayo kwincwadana yokusebenza, ivuse ngokulinganayo kwaye uyipakishe.
4. Amanyathelo okhuseleko: (1) Musa ukumiswa kubushushu obuphezulu ngaphezu kwe-100 ℃, kungenjalo iya kubulala iintsholongwane ezisebenzayo. Ukuba kunyanzelekile ukuba yome, kufuneka yongezwe emva kokumiswa. (2) Ngenxa yezizathu ezahlukeneyo, umxholo webhaktiriya kwisichumiso sebhayoloji esenziwe ngendlela esemgangathweni yokubala uhlala ungafikeleli kwidatha efanelekileyo, ke ngoko kwinkqubo yokulungiselela, ii-microorganisms ezisebenzayo ngokubanzi zongezwa ngaphezulu kwe-10% ngaphezulu kwedatha efanelekileyo .
2) indlela yokuguga yesibini kunye nokwandiswa kwenkcubeko
Xa kuthelekiswa nendlela yokongeza ngokuthe ngqo, le ndlela inenzuzo yokugcina iindleko zebhaktheriya. Icala elisezantsi kukuba uvavanyo luyafuneka ukumisela inani leentsholongwane ezithile ukongeza, ngelixa usongeza inkqubo encinci. Kuyacetyiswa ngokubanzi ukuba isixa sokongeza sibe ngama-20% okanye ngaphezulu kwendlela yokongeza ngokuthe ngqo kwaye sifikelele kumgangatho wesichumiso semvelo sesichumiso sendalo ngendlela yokuguga yesibini. Amanyathelo okusebenza ngala alandelayo:
1. Khetha iintsholongwane ezithile ze-microbial (umgubo): inokuba luhlobo olunye okanye zibe mbini, ubuninzi zingabi ngaphezulu kweendidi ezintathu, ngenxa yokuba iintsholongwane ezininzi zikhetha, ukukhuphisana ngezondlo phakathi komnye nomnye, zikhokelela ngokuthe ngqo kwiziphumo zebacteria ezahlukeneyo.
2. Ukubalwa kwemali yokongezwa: ngokomgangatho wesichumiso se-bio-organic e-China, inani elisebenzayo leebhaktiriya eziphilayo zesichumiso se-bio-organic kufuneka lifike kwi-0.2 yezigidi / g. Kwitoni enye yezinto eziphilayo, inani elisebenzayo leebhaktiriya eziphilayo ≥10 billion / g ye-microbial ethile esebenzayo (umgubo) kufuneka yongezwe ubuncinci i-0.4 kg. Ukuba inani leebhaktiriya eziphilayo liphila li-1 yezigidigidi / g, ngaphezulu kwe-4 kg kuya kufuneka kongezwe, njalo njalo. Amazwe ahlukeneyo kufuneka alandele imigangatho eyahlukeneyo yokongeza ngokufanelekileyo.
3. Yongeza indlela: ibhaktiriya esebenzayo (umgubo) kunye nengqolowa yengqolowa, irayisi yomgubo womgubo, umgubo okanye nayiphi na enye yazo yokuxuba, yongeza ngokuthe ngqo kwizixhobo zezinto eziphilayo ezixubileyo, uxube ngokulinganayo, ufumene iintsuku ezingama-3-5 ukwenza into ethile iintsholongwane ezisebenzayo zizenzekelayo.
4. Ukufuma kunye nolawulo lobushushu: ngexesha lokufakwa kwengqele, ukufuma kunye nobushushu kufuneka bulawulwe ngokweempawu zebhayoloji ezisebenzayo. Ukuba amaqondo obushushu aphezulu kakhulu, ukuphakama komfumba kufuneka kuncitshiswe.
5. Ukuchongwa komxholo webhaktiriya osebenzayo: emva kokuphela kokufakwa kwengqokelela, ukuthathwa kwesampulu kunye nokuthumela kwiziko elinamandla okufumanisa i-microbial kuvavanyo lokuqala ukuba ngaba umxholo wezinto ezithile ezincinci unokuhlangabezana nomgangatho, ukuba unokufezekiswa, ungenza isichumiso semvelo sezinto eziphilayo ngale ndlela. Ukuba oku akuphumelelanga, yonyusa inani elongezwayo leebhaktiriya ezithile ezisebenzayo ukuya kwi-40% yendlela yokongeza ngokuthe ngqo kwaye uphinde ulinge kude kube yimpumelelo.
6. Amanyathelo okhuseleko: Musa ukumiswa kwiqondo lobushushu eliphezulu ngaphezu kwe-100 ℃, kungenjalo iya kubulala iintsholongwane ezisebenzayo. Ukuba kunyanzelekile ukuba yome, kufuneka yongezwe emva kokumiswa.
Kwi ukuveliswa kwesichumiso se-bio-organic emva kokuvumba, ihlala iyimpuphu, ehlala ibhabha nomoya kwixesha elomileyo, ibangela ilahleko yezinto ezingafunekiyo kunye nongcoliseko lothuli. Ke ngoko, ukunciphisa uthuli kunye nokuthintela ukubamba,inkqubo granulation isetyenziswa rhoqo. Ungasebenzisa igranulator yamazinyo evuselelayo Kumfanekiso ongentla wegranulation, inokusetyenziswa kwi-humic acid, ikharbon emnyama, i-kaolin kunye nezinye kunzima ukwenza izinto eziyinyani.